Otu esi etinye faịlụ na Gmail maka gam akporo | Gam akporosis
Otu esi etinye faịlụ na Gmail maka gam akporo
Dika teknụzụ enwegoro, ịdabere na kọmputa na-ebelata. Ọ bụwanye ihe a na-ahụkarị iji ama ma ọ bụ mbadamba anyị iji zipu ozi ịntanetị, nyocha akwụkwọ, banye faịlụ PDF, see foto, dekọọ vidiyo ... ozi…
Gmail, nke kachasị eji ozi ịntanetị n'ụwa, na-enye anyị otu ngwa ngwa email zuru oke na ahịa na ọnụọgụ nhọrọ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị otu kachasị eji, ọkachasị na mpaghara onwe, na ọkachamara, inwe ike itinye faịlụ site na ama anyị nwere ike ịchekwa ndụ anyị na ihe karịrị otu oge. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ka itinye faịlụ na Gmail si gam akporo, M na-agba gị ka ị nọgide na-agụ.
Izipu mgbakwunye site na Gmail bụ usoro dị mfe, dịka nke dịịrị anyị na ụdị desktọọpụ, usoro na anyị zuru ezu n'okpuru.
Nke mbụ, anyị mepee ngwa Gmail, pịa bọtịnụ ahụ + nke dị n'akụkụ aka nri ala nke ihuenyo ahụ.
Ọzọ, anyị na-ahọrọ akaụntụ nke anyị chọrọ iji zipu ozi email nke anyị chọrọ itinye faịlụ a na-ekwu, ọ bụrụhaala na anyị nwere ihe karịrị otu akaụntụ ahazi na ọdụ anyị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ndabara akaụntụ anyị ahazi na ekwentị anyị ga-egosipụta.
Mgbe ah pịa na clip nke dị n'elu ihuenyo ma họrọ: Gbakwunye faịlụ (ma ọ bụrụ na ọ bụ na ngwaọrụ) ma ọ bụ Tinye site na Draịvụ (ọ bụrụ na echekwara faịlụ ahụ na akaụntụ Google Drive anyị). Na nke a, anyị ga-etinye faịlụ site na ama anyị.
Ọzọ, anyị na-ahọrọ ụdị faịlụ anyị chọrọ itinye ka e wee kpochapụ ụdị faịlụ ndị a ga-egosipụta: Vidiyo, Foto, Audio y Documentos.
Ozugbo anyị chọtara ya, anyị ga-pịa ya na sekọnd mgbe e mesịrị, windo email ga-apụta na faịlụ ejiri.
N'ikpeazụ, anyị pịrị igodo izipu ozi, ọ gosipụtara dị ka triangle gbadoro aka nri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi etinye faịlụ na Gmail maka gam akporo
Samsung Galaxy M21 dị ugbu a na Spain
Amazon laghachiri na ọgụ na Amazon Fire 8 HD mbadamba